﻿AU Chairmanship for All Zimbabwe
Home » Governance » ﻿AU Chairmanship for All Zimbabwe
PRESIDENT Mugabe yesterday said Zimbabwe’s profile in Africa has risen as shown by the vote of confidence vested in the country by not only Sadc, but also the African Union, saying the dual chairmanship he has, he holds on behalf of all Zimbabweans.President Mugabe’s star has been on the rise since his resounding re-election in the July 31, 2013 harmonised elections as he went on to be elected deputy chairperson of Sadc at the annual summit in Lilongwe, Malawi, in August 2013, deputy chairperson of the AU at the 22nd Summit in January 2014, Sadc chairman at the summit held in Victoria Falls in August last year, and now AU chairman at the just-ended 24th Ordinary Session of the AU General Assembly in Addis Ababa, Ethiopia.
“Zvino kuno kwedu kune mutsauko uripo. MDC and Zanu-PF zvikwata zvemuno munyika. Tapihwa hukuru sehwatava nahwo uhu neAfrica yose. Hapana angati haasi mazviri nekuti iyi iZimbabwe yose yasimudzirwa saka vanosungirwa kufarawo panyaya iyoyo.
Haisiri nyaya yekurwisana matongerwo enyika ino, inyaya yekuti mhuri yese yeZimbabwe tingaipe here hupfumi ihwohwo saka ndopatinosungirwa kubatana ipapo, kubatana chose (We have been honoured by the whole of Africa and everyone has reason to celebrate whether one belongs to Zanu-PF or MDC),” President Mugabe said.
“Chimiro chedu muAfrica chakwirira Zimbabwe yave pamusorosoro apo. Ndozvasvitsa Africa kuti itipe rukudzo rwokuti chairman wepamusoro, ini, avepo. Chadaro chii? Chadaro hachisi chinhu chimwe chete. Kuratidza kwakaita vanhu muno munyika kubatana vachirwisa muvengi kushinga nekuzvipira kuti nyika yedu ive mumaoko edu. Toenderera mberi tichiti kushinga ikoko muvengi asadhararawo achiisa masanctions kuti aiwa mabhunu arambe ari muno(Our stature in Africa has risen showing our unity in fighting the enemy who continues imposing sanctions on us in the hope of keeping his kith and kin in control),” President Mugabe said.
“Ipapo vanhu vedu vakati tinozvipira tingave nekushaya zvatinoshaya nekuti tiri kudzivirirwa kuti tinge tichitengeserana vevamwe asi zvekuti mabhunu adzoke muno munyika kwete. Zimbabwe ndeye vanhu veZimbabwe. Africa yevanhu veAfrica. Saka ipapo kusadharara kwataika kunyange zvarwadza sei hatife takasarenda kuti varungu vauye zvakare(We might be facing challenges here and there and be exposed to unfair trade practices, but we will never surrender for the whites to return. Africa for Africans),” President Mugabe said.
He appraised the gathering of deliberations made and resolutions adopted by the Summit particularly the continent’s 50-year development plan, Agenda 2063, that is a mirror-image of Zim-Asset, Government 5-year development plan for the period 2013 to 1018.
“Ndakava nekutsamwira vana VaKenyatta ndikati wakaenderei kunobvuma kutongwa kunzei uri President wekuKenya. Zvino akabvuma akati akaenda isu takasungana kuti kuno kuti rega kuenda. Unonyadzisa baba vako vaKenyatta ikoko kwavari hatidi kuzvinzwa izvozvo. Ndonzira dzedu idzodzo dzatava nadzo idzodzo,” he said.
February 5, 2015 User1 Governance Comments Off on ﻿AU Chairmanship for All Zimbabwe